Inona no ho hita ao amin'ny distrikan'i Montmartre any Paris | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita ao amin'ny distrikan'i Montmartre any Paris
Nofinofy ny mandeha any Paris ho an'ny olona maro satria tanàna mahafinaritra izy io izay manana zavatra betsaka hatolotra antsika. Manomboka amin'ny terraces amoron'ny Seine ka hatrany amin'ny Eiffel Tower na toerana izay anisan'ny tantara toa an'i Notre Dame. Nefa koa izy io dia manana faritra tsara tarehy izay tokony hitsidihanao amin'ny filaminana tanteraka hankafizanao ny zorony rehetra, toy ny manodidina an'i Montmartre malaza.
Montmartre dia ao amin'ny arrondissement faha-XNUMX any Paris, faritra iray malaza indrindra amin'ny havoana misy azy, izay misy ny Basilica of the Sacred Heart. Izy io dia iray amin'ireo faritra fizahan-tany maro ao an-tanànan'i Paris, noho izany dia ho hitantsika izay rehetra hita eto amin'ity faritra bohemia any Paris ity.
1 Ny tantaran'i Montmartre
2 The Holy Holy Basilica
4 Ny Rue de l'Abreuvoir
5 Moulin Rouge sy Boulevard Clichy
Ny tantaran'i Montmartre
Ity faritr'i Paris ao Montmartre ity dia kaominina frantsay taloha, ao amin'ny departemantan'i Seine. Tamin'ny 1860 dia niditra tao Paris ho toy ny distrika resahinay, dia ny XVIII. Ity faritra ity dia toerana tena bohemia nandritra ny taonjato faha-XNUMX izay nonina mpanakanto maro. Toerana iray izay nanana laza ratsy ihany koa ho an'ny cabarets sy brothel be dia be. Ny mpanakanto manan-danja toa an'i Edith Piaf, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh na Toulouse Lautrec dia nonina tao amin'ity tanàna ity, ankoatry ny maro hafa. Ny rivo-piainana bohemia sy zavakanto no tena hampalaza ny manodidina an'i Paris ity, satria tsy izy no manana tsangambato be indrindra. Na dia nihena aza izany sento bohemia izany tao anatin'ny taona maro, dia mbola mpizahatany ao an-tanàna ihany izy io ankehitriny.
The Holy Holy Basilica
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony ho hitantsika dia ny Basilica an'ny fo masina izay mipetraka eo an-tampon'ny havoana Montmartre. Raha te ho tonga any ambony isika dia afaka mandray ilay funicular Montmartre izay toy ny tramway izay mitondra antsika mankany amin'ny faritry ny basilica sy amin'ny toerana fihaonan'ireo mpanao hosodoko. Aza adino fa ity faritra ity dia mbola toerana tsara tarehy sy bohemia. Azo atao ihany koa ny miakatra mivantana amin'ny tohatra manoloana ny basilica, miaraka amin'ny zaridaina ary avy aiza no ahitantsika ny fomba fijery kanto ambonin'ny tafo Paris. Toerana iray ipetrahana matetika ny olona ary misaintsaina ny sarin'i Paris. Ny basilika dia misarika ny saina amin'ny loko fotsy sy ny fombany Romano-Byzantine. Vita tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ary androany dia iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra eto an-tanàna. Ity havoana ity dia toerana lava noheverina ho masina.
Manodidina ny basilica dia misy arabe mahaliana sasany. Rue du Chevalier de la Barre dia arabe kely izay ahitanao ny basilica ary ahitantsika ihany koa ireo magazay kely hividianana fahatsiarovana tsara tarehy avy any Paris, ka fijanonana tsy maintsy atao izany. Akaikin'ity arabe ity koa no misy ny Place du Tertre, izay toerana nihaonan'ireo mpanao hosodoko taloha efa tamin'ny taonjato faha XIX. Androany dia mbola toerana anaovan'ny mpanao hosodoko amidy ny sangan'asany, satria mbola mpizaha tany sy mitsidika azy io. Ho an'ny maro dia toy ny fahatsiarovana fahatsiarovana mividy sanganasan'ny mpanakanto sasany ao amin'ity kianja malaza ity izy io.
Ny Rue de l'Abreuvoir
Ity arabe ity dia niseho vao haingana tao amin'ny andian-dahatsoratra 'Emily in Paris' ary tian'ny rehetra izany, saingy làlana iray izay efa toerana mpizahatany tokoa, satria noheverina ho iray amin'ireo mahafatifaty indrindra eto an-drenivohitra frantsay. Ity arabe izay akaikin'ny Sagrado Corazón ity koa dia teboka iray hafa izay tsy azontsika hadino. Afaka manao izany koa isika mijanonana kely amin'ny toerana toy ny cafe Maison Rose, ilay toerana hankafizan'ireo mpihetsiketsika amin'ny alina mahafinaritra. Toerana iray mampiavaka an'i Paris ity ary hanaiky ianao fa sarotra ny mampifanaraka ny manja.
Moulin Rouge sy Boulevard Clichy
Ity boulevard androany ity dia manana fivarotana firaisana sy fivarotana toy izany, ka toa tsy toerana tsara tarehy toy ny taonjato maro lasa izay. Na izany aza eto afaka mahita ny Moulin Rouge malaza isika, izay iray amin'ireo faritra nalaina sary indrindra eran'i Paris rehetra. Hisarika ny sainao ny lokony mena ary ny maha-cabaret azy malaza indrindra ao an-toerana, izay efa nitsidika azy ireo ny mpanakanto toa an'i Toulouse Lautrec mba hahita ilay mahay afaka mandihy. Etsy ankilany, eo akaiky eo ny 'Café des 2 moulins' izay niasan'ilay mpilalao sarimihetsika Amelie tamin'ny horonantsary. Raha tianao izany ary tadidinao ny toerana misy azy dia afaka mijanona ao amin'ity cafe ity ianao. Ho tsapanao fa ny fivarotana kafe any Paris dia kolontsaina iray manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita ao amin'ny distrikan'i Montmartre any Paris
Ny morontsiraka tsara indrindra any Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco ary Sancti Petri
Goa, paradisa any India